UN oo cagajiiday magdhowga diyaarado dagaal oo ku socday Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Qaramada Midoobay ayaa ka caga jiidday iney Uganda magdhow ka siiso 3 diyaaradood oo nuuca qumaatiga u kaca ah, kuwaasoo sanadkii 2012 ku burburay dhulka buurleyda ah ee Mount Kenya ee dalka Kenya, xilli ay kusoo socdeen Soomaaliya, si uga mid noqdaan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Uganda ayaa 4 diyaaradood oo helicopters waxey bishii August kazoo duulisay Kampala, waxaana qorshuhu ahaa iney ku degaan garoon milateri oo ku yaalla magaalada Wajeer ee gobolka Woqooyi Bari Kenya, kadibna ay uga soo gudbaan Muqdisho.
Mid ka mid ah diyaaradaha ayaa si nabad ah ku gaartay Wajeer, hase ahaatee 3 kale ayaa ku burburay dhul buuraley ah oo ka tirsan Kenya, waxaana ku dhintay 7 sarkaal, halka tiro kale oo badana dhaawacmeen.
Haddaba Uganda ayaa Qaramada Midoobay ka dalbatay in magdhow laga siiyo 3-daas diyaaradood, hase ahaatee waxaa soo wajahaya rajo xumo kadib markii UN-ku ka cagajiiday.
“Ma arko wax ifafaalo wanaagsan in Qaramada Midoobay ay magdhaw inaga siin doonto khasaaraha diyaaradaha qumaatiga u kaca, waxaana sameyn doonaan wax kasta oo suurtogal ah in aan helno magdhow ah diyaaradihii helicopters-ka ahaa ee naga bur buray“ayuu yiri Taliyaha Ciidamada Difaaca Uganda, Gen Katumba Wamala, oo saxaafada kula hadlay xarunta ciidamada ee Mbuya, ee caasimada Kampala.
Urur caalami ah oo ka shaqeeya hubka caalamka loo kala gudbiyo ee la yiraahdo “SIPRI” ayaa sheegay in saddexda diyaaradood ee milliteriga Uganda ka burburay ay ahaayeen nooca MI24 kuwaasi oo kharajkooda guud dhan yahay 10-million oo Dollar.
Gen Katumba ayaa qiray in Qaramadda Midoobay, baay Uganda u sheegtay inta diyaaradaha qumaatiga ay burbireen ka hor inta aysan guda galin goobta howlgalka ee Soomaaliya.
Sedexda diyaaradood ee dowladda Uganda ay magdhowga uraadineyso ayaa waxaa ay ku bur bureen Buuraha Mount Kenya bishii August sanadkii 2012, iyadoona loo sababeyay cimida oo aad u xumeyd.